တင်ဒါအသိပေးချက် - YHT ပင်မကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဌာနများလေအေးပေးစက်။ RayHaber | raillynews
[24 / 01 / 2020] ၁၁၈ CHPli Tanrıkuluမှဝေဖန်သောရုပ်သံလိုင်း	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[24 / 01 / 2020] CHP သည်အငြင်းပွားဖွယ်ကောင်းသောတံတားများ၊ အဝေးပြေးလမ်းများနှင့်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများသို့ထုတ်ယူရန်တောင်းဆိုသည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
« တင်ဒါအသိပေးချက်: Antalya Tram Vehicle Purchase Tender
ဝယ်ယူရေးသတိပေးချက် - ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေး ၀ န်ထမ်းများ၏ ၀ ယ်ယူခြင်း »
TCDD ပို့ဆောင်ရေး INC Operation Manager / တူရကီ၏ YHT အထွေထွေဒါရိုက်တာ
YHT မူလစာမျက်နှာစောင့်ရှောက်ဆောင်မှုများလေအေးပေးစက်ဝန်ဆောင်မှုဝယ်ယူရေးအမှတ် 4734 19 ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်:
တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 595431
က) လိပ်စာ: Anafartalar Mah ။ Talatpaşa Boulevard အဘယ်သူမျှမ: 10 တူရကီဘူတာအဆောက်အအုံလူမျိုးALTINDAĞ / တူရကီ
ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3123090515 / 71676 - 3123246338
ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: yhtisletmemudurlugu@tcddtasimacilik.gov.t
ဃ) တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းအင်တာနက်လိပ်စာတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
နု၏ ​​2-service ကိုဘာသာရပ်
ခ) နေရာ - ETİMESGUT YHT VEHICLE MANUTENANCE အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲညွှန်ကြားရေးမှူးETİLERအိမ်နီးချင်းETİMESGUT / ANKARA
ဂ) Duration: နေ့စွဲ 01.01.2020, 31.12.2020 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆုံးသည့်ရက်စွဲ
က) Place: YHT စီမံခန့်ခွဲမှုညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးခန်း Anafartalar Mah ။ Talatpaşa Boulevard အဘယ်သူမျှမ: 10 တူရကီရထားဘူတာအဆောက်အအုံ (အဟောငျး Lounge) Ulus- Çankaya / တူရကီ
ခ) နေ့စွဲနှင့်အချိန်: 16.12.2019 - 14: 00
YHT ပင်မစောင့်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှုများလေအေးပေးစက် ၀ န်ဆောင်မှုတင်ဒါရလဒ်
တင်ဒါအသိပေးချက် - လေအေးပေးစက်နှင့်လေအေးပေးစက်များလေအေးပေးစက်တပ်ဆင်ခြင်းın
HHT Set Project ပြတ်ရွေ့ရှာဖွေခြင်း - ပြeshနာဖြေရှင်းခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပြုပြင်ခြင်း၊
Bursa ပင်မပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်၏အဆုံးသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်! | Bursa မူလစာမျက်နှာ Access ကိုအစီအစဉ်
ကြိုးတပ်ဘတ်စ်ကားအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦးရိုင်းများတွင် 250 သန်းခရီးသည်ကိုဂုဏ်ပြုရန်စီစဉ်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
Behiç Erkin Tomb Eskisehir အတွက်အစဦးမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ခဲ့သည်
မူလစာမျက်နှာပြုစုစောင့်ရှောက်မှုစင်တာ YHT အဓိပ္ပာယ် Iftar အစီအစဉ်
တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း - ကျွန်ုပ်တို့၏Vangölüကူးတို့ ဦး စီးဌာန၏ TCDD T / F Rafet ÜNALကူးတို့သင်္ဘော
တင်ဒါကြေငြာချက် - အန်ကာရာအမြန်ရထားလမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးသိုလှောင်ရုံတည်ဆောက်ခြင်း…
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဖာရိရှဲများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်၏ TF r.ünalအလုပ်နှစ်ခုလုံးအိမ်ရှင်
YHT စီမံခန့်ခွဲမှုညွှန်ကြားမှု, YHT မူလစာမျက်နှာစောင့်ရှောက်ဆောင်မှုများအဲယားကွန်း
TCDD လက်မှတ်အရောင်းများကိုပုဂ္ဂလိကကဏ္ Transfer သို့လွှဲပြောင်းရန် BTS မှတောင်းဆိုခြင်း